Voadika ny 26 Desambra 2012 9:32 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, polski, Español, Français, عربي, English
Mirary Krismasy avy any Yemen! Ny andron'i krismasy no andro nitifiran'ny ‘drone’ tany Yemen, namonoany ‘ahiahiana’ ho mpitolona dimy. Ny daroka voalohany nahafaty olona roa nandeha tanaty fiara iray tany amin'ny tanàna atsimo, faritanin'i al-Bayda tamin'ny alatsinainy. Tamin'ny fanafihana faharoa, izay nitranga tamin'ny alatsinainy ihany koa, Nitifitra tamin'ny balafomanga olona telo nandeha moto mamakivaky ny faritanin'i Hadramout ilay voromby tsy fantatra anarana.
Ny mpitondra antsika ihany no mamely antsika kokoa noho ny Amerikana!
Maro no efa vosoratra, nosiahana, ary nobilaogen'ny Yemenita hilazany ny haeerany amin'ny fitondran'i Obama sy ny fitondram-panjakana Amerikana noho ny daroka tsy mitsahatra ataon'i Etazonia, eny fa na efa manaiky ny fanafihan'ny drones [mg] aza ny filoha. Iza no tokony melohina kokoa amin'ity tsy rariny ity?